CADAALAD DARRO FARMAAJO: Ka bogo dacwado la yaab leh oo taagan! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka CADAALAD DARRO FARMAAJO: Ka bogo dacwado la yaab leh oo taagan!
CADAALAD DARRO FARMAAJO: Ka bogo dacwado la yaab leh oo taagan!
(Florida) 31 Maajo 2018 – Maraykanku waa qaran ka kooban quruumo kala duwan oo meel isla yaalla, waa dal ay ka dhacaan dacwooyinka ugu qosolka badan waxaadna ka garan kartaa inay halkaa ku nool yihiin 80% qarreennada adduunku.
Qareennada dalkaasi waxay dhan yihiin 1.3 milyan oo sharciga ka af-naqa, kuwaasoo sanadkiiba maareeya malaayiin dacwo, ilaa heer dadka Maraykanka lagu naanayso ”bulsho dacwooleey ah” oo waadigii ogaa in maalin dhowayd booliiska loogu yeerey wiil madow ah oo ku dhex hurdoodey maktabad ku taalla meel jaamacad ah.
Hadaba, waxaynu eegi doonnaa qaarka ugu qosolka badan malaayiin dacwo oo kaa maajinaya oo dalka ka dhacay, kuwaasoo ka dhan shakhi ama shirkad ee ka bogo kuwa ugu daran.
Todobaadkii tegey laba qof oo wax ka iibsada makhaayadda silsiladda ah ee McDonald’s qaybta gobolka Florida ayaa lagusoo oogey dacwad ah ku saabsan inay cadaalad ka samaynin farmaajada, maxaa yeelay bay leeyihiin haddii farmaajo laguugu daro iyo haddii kaleba waa isku lacag.
Waxay labadan qofi dalbanayaan in McDonald’s laga soo dhiciyo lacag dhan $5 milyan oo doollar, iyagoo taa u aanaynaya in laga qaado lacagta farmaajo aysan cunin isla markaana aysan dalban ama rabin.
“McDonald’s wuxuu ka lacagaystay dhaqamada noocan ah maxaa wacay wuxuu dadka lacag uga qaadayaa farmaajo aysan dalban ama cunin macaamiishiisu,” ayaa ku xusan dacwadda.
La soso qaybo kale…..
Previous articleAC Milan oo arkatay weeraryahan hor leh! (Weerayahannada ay doonayso)
Next articleIsku aadka Tartan lagu bixin doono shan kun oo doolar oo la soo saaray (Heegan Vs Dekedda,Horseed Vs Elman)